५ वर्षको उमेरमा ४० देश घुमेकी यी बालिका Canada Nepal
५ वर्षको उमेरमा ४० देश घुमेकी यी बालिका
जेठ २५ २०७८
काठमाडौं - विश्वमा घुम्नै पर्ने सुन्दर र शान्त ठाउँ धेरै छन् । नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदा सबैलाई असाध्यै स्वर्गीय आनन्द हुन्छ । यस्तै एक यस्ति बालिका छिन् जसले ४० देश घुमेकी छिन् ।
पत्यार नलाग्ला, तर भारतकी एक ५ वर्षकी बालिकाले सानै उमेरमा आफ्नो घुम्ने इच्छा पुरा गरेकी छिन् । उनले ४० वटा देश भ्रमण गरिसकेकी छन् ।
अजमेरमा बस्ने बालिका धनारीले सानो उमेरमा सबैभन्दा धेरै देश घुमेर इन्डिया बूक अफ रेकर्ड राखेकी छिन् । उनी सोनिया र नरेन बुलानीकी छोरी हुन् । विश्व भ्रमणमा सहयोग पुर्याउने सोनिया र नरेन बुलानी ने हुन् ।
थाइल्यान्डमा व्यापार गर्ने उनीहरुले आफ्नो छोरीलाई ४० देश घुमाएका हुन् । पहिलो यात्रा भारतको गरेकी ती बालिकाले अन्तिमपटक नाइजरको यात्रामा थिइन् ।
धेरै देश घुमेर चर्चामा आएकी ती बालिकासँग धेरैले सेल्फी लिने पनि गर्छन । थाइल्यान्डको विद्यालयमा के–२ मा पढ्ने ती बालिकालाई समय दिन पाउँदा बुबाआमा खुशी छन् ।
जेठ २५, २०७८ मंगलवार २१:५०:१० बजे : प्रकाशित
ह्वेलले निलेर फेरि ओकलिदिएका यी व्यक्तिको अद्भुत कथा, कसरी बाहिर निस्के?
समुन्द्रमा झिँगे माछा सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएका माइकल प्याकर्डले आफूलाई कसरी ह्वेलले निलेपछि फेरि बच्न सफल भए भन्ने पत्रकारहरूलाई बताएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सको प्रोभिन्सटाउन शहर नजिकै समुन्द्रमा गोता लगाइरहेका बेला विशाल जीव ह्वेलको मुखभित्र करिब ३०- ४० सेकेन्ड परेको प्याकर्डले बताए।
त्यसपछि ह्वेलले उनलाई थुकिदिएको बताइएको छ। प्याकर्डको घुँडामा केही चोट लागेको हुनसक्ने बाहेक अरू केही नभएको बताइएको छ। उनकी श्रीमतीले उनलाई अर्को जागिर खोज्न आग्रह गरिरहेकी छन् तर उनी ४० वर्षदेखिको आफ्नो करिअर छोड्ने सोचमा छैनन्।
हम्पब्याक ह्वेल ५० फिटसम्म लामो हुन सक्ने र त्यसको तौल ३६ टनसम्म हुन सक्छ। विश्व वन्यजन्तु कोष डब्ल्यूडब्ल्यूएफका अनुसार संसारभर उक्त ह्वेलको सङ्ख्या ६० हजार रहेको छ।
प्याकर्डले स्थानीय अखबार केप कड टाइम्सलाई भने अनुसार उनी र उनका सहकर्मीहरू डुङ्गामा शुक्रवार बिहान समुन्द्रतिर गएका थिए।
उनका अनुसार मौसम सफा थियो र २० फिट परसम्मका दृश्य सजिलै देखिन्थो।समुन्द्रको पानीमुनि जान लगाइने स्कूबा लुगा लगाएर पानीमा हाम फाल्दा उनले ठूलो बस्तु आफ्ना अगाडि देखे त्यसपछि सबैकुरा कालो भयो।
आफूलाई त्यो क्षेत्रमा पाइने ठूलो सेता शार्कले आक्रमण गरेको अनुमान गरे, "त्यसपछि मैले वरिपरि शार्कको जस्तो दाँत नभएको महसुस गरेँ।"
कसरी बाहिर निस्के?
"हे भगवान् म त ह्वेलको मुखभित्र छु र उसले मलाई निल्ने कोसिस गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाएँ। यत्ति नै भयो, म मर्ने भएँ।"त्यसपछि आफूले आफ्नी श्रीमती र १२ र १५ वर्षका आफ्ना छोरा सम्झेको बताए।
त्यसपछि अचानक उनी पानीमाथि पुगे र टाउको हल्लाउन थाले।"मलाई हावामा फालियो, त्यसपछि पानीमा खसेँ। म मुक्त भएको थिएँ र पानीमा तैरिरहेको थिएँ। मैले विश्वास नै गर्न सकिन… सब कथा सुनाउन म यहाँ छु।"
उनका सहकर्मीहरू उनलाई अधैर्य भएर खोजिरहेका थिए। उनीहरूले प्याकर्डलाई देखे र डुङ्गामा ल्याए।प्रोभिन्सटाउन फायर डिपार्टमेन्टले सीबीएस न्यूज एजेन्सीलाई स्थानीय समय बिहान सवा आठ बजे झिँगे माछा समात्ने मानिसलाई सहयोग आवश्यक परेको खबर पाएको पुष्टि गरेको छ।
उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पत्रकारहरूले उनको अन्तर्वार्ता लिएका थिए।हम्पब्याक ह्वेलले मुख बाएर जति सक्छ उति धेरै खानेकुराहरू निल्छ।
वैज्ञानिकहरूले प्याकर्डलाई जे भयो त्यो एक प्रकारको दुर्घटना भएको ठान्छन्। एकजना विज्ञले केप कड टाइम्सलाई ह्वेलले मानिस निलेको अहिलेसम्म नसुनेको बताए।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
जेठ ३०, २०७८ आइतवार ०७:५३:०७ बजे : प्रकाशित
संसारकै खतरनाक रुख, जसले मानिसको ज्यानै लिन्छ
काठमाडौं - विश्वमा धेरै प्रजातीका रुखहरु छन् । हरेक रुखका आआफ्नै गुण छन् । हामिलाई थाहाँ नै छ धेरै रुखको जरा, पात, फुल, बोक्रा औषधीको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।
औषधीय गुण हुने रुखले विभिन्न रोगको उपचार पनि हुन्छ । तर संसारमा यस्तो रुख पनि छ, जसले मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ । यो रुख निकै बिषालु हुन्छ। त्यसैले यस रुखबारे हामिले जान्नु जरुरी छ ।
‘सरबेरा ओडोलम’नाम गरेको रुख हाम्रो शरिरको लागी निकै खतरनाक छ । हेर्दा सामान्य देखिने यो रुख दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरुमा पाइन्छ । यसले हाम्रो शरिरलाई हानी गर्छ ।
यस रुखलाई सुसाइड ट्रि पनि भन्ने गरिन्छ ।बैज्ञानिकहरुका अनुसार यो रुखमा रहेको विष मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेमा मुटुको धडकन बढ्ने गर्छ। साथै यसको बिषले वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने हुने गर्छ । जसका कारण मानिसको ज्यान जान्छ ।
जेठ ३०, २०७८ आइतवार २२:०३:१६ बजे : प्रकाशित
# खतरनाक रुख
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परिवार भएका यी व्यक्तिको मृत्यु, छन् ३८ श्रीमती र ८९ सन्तान
काठमाडौं - विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परिवारका मुखियाको मृत्यु भएको छ । धेरै परिवार भएर चर्चामा आएका जिओना चानाको भारतको मिजोरम राज्यमा मृत्यु भएको छ।
उनको ७६ वर्षको उमेरमा आइतबार मृत्यु भएको बीबीसीमा जनाइएको छ । ठूलो परिवारको मुखिया मानिएका जिओनाका ३८ श्रीमती, ८९ सन्तान र ३६ नातिनातिना रहेका छन् । धेरै सन्तान भएका व्यक्तिमा विश्वमा रेकर्ड राख्न सफल भएका जिओना अझै पनि सन्तानको गन्ति गर्न कठिन रहेको बताइन्छ ।
एक विवरण अनुसार उनको ३८ श्रीमती, ९४ सन्तान, ३३ नातिनातिना र एक पनाति रहेको बताइएको छ । जिओन बहुपत्नी प्रथा भएको एउटा धार्मिक सम्प्रदायका प्रमुख पनि हुन् । उनको घरमा नै स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो ।
अस्पतालमा उनलाई मृत अवस्थामा लगिएको जनाइएको छ । यस परिवारलाई 'रिप्लिज् बीलीभ इट अर नट' टिभी शोमा यो परिवार दुई पटक देखाइएको थियो । उनको परिवार सय कोठा भएको घरमा बस्ने गर्छन् ।
जेठ ३१, २०७८ सोमवार १९:२३:२५ बजे : प्रकाशित
# सबैभन्दा ठूलो परिवार
दाँत माझ्ने क्रममा मोरङकी गङ्गाको मुख भित्र छिर्‍यो ब्रस, शल्यक्रिया गरी पेटबाट निकालियो
काठमाडौ - मोरङमा एक अनौठा घटना घटेको छ । एक महिलाको मुखबाट ब्रस छिरेपछि शल्यक्रिया गरेर निकालिएको छ ।
मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका–४ का ३५ बर्षीय गङ्गा मगरको शल्यक्रिया गरी पेटबाट दाँत माझ्ने ब्रस निकालिएको हो । उनले गएको बुधबार दाँत माझ्ने क्रममा एक्कासी ब्रस मुखबाट भित्र छिरेको थियो ।
उनले मुखमा ब्रस छिराएर जिब्रो सफा गर्न लागेकी थिइन् । त्यसक्रममा चिप्लिएर ब्रस पेटभित्र पसेको बताइएको छ । ब्रस भित्र छिरेपछि दुख्ने पोल्ने नभएको तर डर भने लागिको गङ्गाले बताइन् ।
उनले ब्रस पेटभित्र छिरेको कुरा गर्दा परिवार र गाउँमा पनि पत्याएनन् । उनी विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल पुगेर चेक गराइन् । इन्डोस्कोपी गरेर हेर्दा ब्रस पेटभित्र देखियो । डाक्टर पनि अचम्म माने ।
डाक्टरहरुले तानेर निकाल्ने कोशिस गरे तर निस्किएन । पछि पेटको सानो भाग चिरेर १५ सेन्टिमिटरको ब्रस पेटबाट निकालियो । अहिले गङ्गाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
आषाढ १, २०७८ मंगलवार १३:२०:५१ बजे : प्रकाशित
# मुख भित्र छिर्‍यो ब्रस
काठमाडौं - भारतको महाराष्ट्रमा रहेको हात्ती निकै चलाख छ । तिर्खा लागेको बेला ताल तथा पोखरी नभेटिएमा आफै धारा चलाएर पिउने गर्छ ।
रुपा नामको हात्तीको एक भिडियो अहिले निकै चर्चामा छ । बीबीसी नेपालीले राखेको यस भिडियोमा रुपाले धारा चलाएर मज्जाले पानी पिएकी छिन् ।
भारतको आसाममा जन्मिएकी रुपालाई सबैले चलाख हात्ती भन्ने गर्छन् । भिडियोमा रुपाले धारा चलाउछिन् र तल जम्मा भएपछि पानी पिउछिन् । हेर्नुहोस् बीबीसीको यो भिडियो
आषाढ ३, २०७८ बिहिवार ०८:१२:०१ बजे : प्रकाशित
# चलाख हात्ती
लोप भएको भनिएको यो अनौठो माछा, जुन १०० वर्ष बाँच्न सक्छ
एउटा प्रजातिको माछा आश्चर्यजनक रूपमा लामो समय अर्थात् एक शताब्दीसम्मै बाँच्न सक्ने एउटा नयाँ अध्ययनले सङ्केत गरेको छ। कुनै बेला लोप भइसकेको ठानिएको उक्त माछालाई 'लिभिङ फसिल' 'अर्थात् सजीव जीवावशेष' मानिन्छ।
सीलक्यान्थ भनिने उक्त माछाको आयु पहिला २० वर्षजति हुने ठानिएको थियो। तर नयाँ आकलनअनुसार शार्कजस्तै उक्त जलचर १०० वर्षजति बाँच्ने देखिएको छ।
उक्त माछाको आयु निर्धारण गर्न फ्रान्सेली अध्ययनकर्ताहरूले सङ्ग्रहालयमा सङ्गृहीत कत्लाको अध्ययन गरेका थिए।उक्त माछाले आफ्नो जीवनको मध्यकालको अन्तिमतिर मात्र प्रजनन गर्छ। अनि गर्भधारण गर्ने समय पाँच वर्षसम्म हुन सक्छ।
बिस्तारै हुर्किने र थोरै सन्तान जन्माउने माछाहरू जलवायु परिवर्तन तथा धेरै माछा मार्ने प्रवृत्तिका कारण लोप हुने खतरामा परेका छन्।फ्रान्सको यूनिभर्सिटी अफ मोङ्पोल्येका डा. ब्रुनो अर्नान्ड सीलक्यान्थको जीवनबारे थाहा पाउँदा संरक्षणका लागि बलियो उपाय अवलम्बन गर्न सकिने बताउँछन्।
"संरक्षणका लागि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण ढाँचा भनेको यो प्रजातिका माछाको सङ्ख्या थाहा पाउन सक्नु हो," उनले बीबीसी न्यूजलाई भने। "यो नयाँ जानकारीले त्यसमा हाम्रो पहुँच बढाउनेछ।"
हराउने र भेटिने क्रम
सन् १९३८ मा दक्षिण अफ्रिकामा माछा समाउने क्रममा जालमा नपर्दासम्म सीलक्यान्थ लोप भइसकेको ठानिएको थियो।लगत्तै उक्त माछाका दुईवटा समूह अफ्रिकाको पूर्वी तटमा र अर्को इन्डोनेशियाको सुलावेसीमा फेला परे।
महादेशहरूको उथलपुथल र डाइनसोरलाई लोप गराउने क्षुद्रग्रहको ठक्कर सहन गर्दै सीलक्थान्थका पूर्वजको उत्पत्ति ४२ करोड वर्षअघि भएको थियो।
अफ्रिकी समूहलाई अतिसङ्कटापन्न मानिन्छ। उक्त समूहमा केही सय माछा मात्र जीवित भएको ठानिन्छ। समुद्र काप्चामा बस्ने यी माछा १.८ मिटरसम्म बढ्न र ९० किलोभन्दा बढी तौलका हुन सक्छन्।
"सीलक्यान्थहरू सबैभन्दा सुस्त नभए पनि समुद्री माछामध्ये सुस्त जीवनवृत्त भएका माछा हुन्। यिनको समुद्री गहिराइमा हुने शार्क र रफीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध हुन्छ," फ्रान्सको नोर्थ सी मत्स्य अनुसन्धान एकाइका केलिग महे भन्छन्।
"त्यसैले हाम्रा नतिजाले यसबाट आशाभन्दा पनि यिनको अनौठो जीवनवृत्तले यी अझ खतरामा भएको देखाउँछ।" अबका अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले यिनको वृद्धिदरसँग तापमानको सम्बन्ध हेर्न खोजिरहेका छन्।
त्यसबाट जलवायु परिवर्तनको तिनमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने थाहा दिनेछ। उक्त अध्ययन 'करन्ट बायोलजी जर्नल'मा प्रकाशित भएको हो।
आषाढ ५, २०७८ शनिवार १५:३०:५५ बजे : प्रकाशित
# अनौठो माछा